Yintoni ukusikwa kwe-Thai kunye nendlela eqhutywe ngayo ngokuchanekileyo ngokwezithethe zamachiza aseMpuma.
Izixhobo ze-massage zaseThailand, iingcebiso kunye neengcebiso.
Kukho iingcinga ezininzi eziphikisanayo malunga nokusikwa kwe-Thai. Ngokweninzi, unxulumene nesondo okanye uhlobo oluthile lwenkqubo yobuthakathaka. Kodwa eneneni, intsingiselo ye-massage yaseThai ikude neyo. Iquka uxinzelelo oluqinileyo kwiimisipha, ukuzivocavoca okufana ne yoga, ukudibanisa kunye nokuvuselela amandla omzimba. Imbali yale nkqubo ixhomekeke ngokujulile kwiyeza lamasiko aseNdiya naseShayina. Ukuxilisa okokuqala kwaqala ukusebenza ngaphezu kweminyaka engamawaka amabini edlulileyo.
Okwangoku, iintlobo ezimbini ze-massage zaseThailand zenziwa ngokubanzi. Makhe sithethe ngazo ngokunye.
Eziqhelekileyo. Kuyinto yakhe yokwenza iidonons zangaphandle ezweni lethu okanye abakhenkethi abaye eThailand okanye kwamanye amazwe aseAsia. Kwaye nangona kukho iindawo ezincinci zezilwanyana, ukubonakala okubalulekileyo kukusetyenziswa nje kweminwe kunye neentende, kodwa nakwezinye iindawo zomzimba: izibonda, amahlombe, amadolo, iinyawo kunye nakwezinye iimeko zenza i-massage yesifuba. Kubalulekile ukuba udibane nomzimba osondeleyo kunye nesigulane.
Royal. Into ehlukile kukuba i-masseur ihamba kunye nesigulane emadolweni kwaye igcina umgama. Kule nkqubo, kuphela izilwanyana ezisetyenzisiweyo, ngokuqhelekileyo zingaphantsi kweentendelezo, isiguli asidingeki ukuba silale phantsi, i-masseur yenza konke.
Iyintoni umphumo wokusilalisa?
Kwabo abangazange bazame inkqubo enjalo, kuya kuba lunomdla ukwazi oko kuchaphazelayo kwaye zeziphi iziphumo zokulindela.
Indawo ekuxhatshazwayo ivuselela ngamandla, i-edema iphelile kwaye ukujikeleza kwegazi kuphucula.
Umzimba uphuma ubuthi, uvuselela izihlunu kunye neetoni.
Inkqubo yenzwa iyasebenza.
Ukuba ukuhluthwa kwe-Thai kuqhutyelwa kwisisu, isondlo sokutya sisilungisiwe.
Uphucula imeko yesikhumba kwaye ihlaziye izikhonkwane ngenxa yokuqhuma okukhulu kwegazi phezu kwesikhumba.
Kukho ezinye iingqinisiso
Ubushushu bomzimba obuphakamileyo okanye nayiphina impawu yemfiva okanye izifo ezithathelwanayo
Ukuvuvukala okanye ukulimala kwiimisipha kunye nezicubu
Musa ukusifakaza kwindawo yokutshatyalaliswa kwintsholongwane okanye iintlobo
Izifo zesikhumba zesimo esithintekayo. Ukuba eso sifo asihambanga nesifo, ukusilalisa kungenziwa, kodwa kungekhona kwindawo echaphazelekayo
Ungavumeli ukuxilisa kwisisu esingenalutho okanye emva kokutya okuninzi. Kwimeko yokuqala, isigulane sinikwa i-snack elula, kwaye okwesibini, iziganeko eziza kubangela isisu kufuneka ziphetshwe.
Ukuzibulala nokulala ngesondo
Asikwazanga ukunyanzelela ukutshatyalaliswa kwe-massage yaseThailand. Uninzi lwabantu abakholwa nabo lukholelwa ukuba le nqubo ihambelana ngqo nenjongo yovuyo okanye ngokwesondo kwaye iqhutyelwa yibele. Kodwa inyaniso ayikho.
Isimo sengqondo esinjalo sasivela emva nje emashumi embalwa edlulileyo, xa iThailand (indawo yokuzalwa yokuhlalisa) yaba yindawo yokuhambela abavakhenkethi ababefuna ukuzama ukulala ngesondo. Ayenzanga kumaziko anjalo ngaphandle kokuhlamba.
Kodwa eqinisweni, indlela yendabuko yokusilalisa ama-Thai kumayeza aseMpumalanga ayinanto nantoni na enxulumene nokuzonwabisa ngocansi. Ngethuba leseshoni, zombini isigulane kunye nomaster bagqoke ngokupheleleyo, kwaye ingcali ayichukumisi nayiphi na indawo ebalulekileyo yomxhasi wakhe.
Okokuqala nokuphambili, ukusikwa kwe-Thai kuhloswe ekuphuculeni imeko yomzimba, ukukhankanya isikhumba nokulawula umsebenzi wezitho zangaphakathi. Ngokuqinisekileyo, unokukwazi ukukwenza ubuchule bokuzenza ngokwakho, ngokujonga izifundo ezininzi zevidiyo.
Ukunyamekela kwamazinyo ngokumomotheka okumhlophe
I-SPA yolondolozo lomzimba
Ikhukhi kunye noshukela omdaka
Umntwana kunye neTV
Indlela yokufundisa umntwana ukubuyisela umyalelo?
Indwendwe exotic: i-passionflower kunye nokusetyenziswa kwayo kumachiza omntu
I-Herculean porridge kwi microwave
Ukunakekelwa kwamazinyo ekhaya
Yintoni endiyidlayo xa i-arthritis yam ibuhlungu?
Izibheno eziNtsundu zoNyaka omtsha 2016